Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka dhalaya, Mashiinka caaga ah, Mashiinka Buuxinta - FAYGO
Khadka Kufsiga Bixinta PPR
Mashiinka caaga qoorta dhalada ah ee caaga ah
Mid waa FAYGOBLOW oo naqshadeeya oo sameeya mashiinka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'PET, PE' iwm.
in ka badan 100+ dal
FAYGO UNION waxay si guul leh ula shaqeysay macaamiisha in ka badan 100 dal, oo ay ku jiraan UK, Spain, Germany, Norway, Switzerland, Italy, Turkey Russia iwm oo ka yimid Yurub, iyo America, Canada, Mexico, Brazil.
aag of 26,650 m2
warshadu waxay ku taalaa magaalada Zhangjiagang, waxay dabooshaa aag dhan 26,650 mitir murabac ah. Kaliya waxay qaadataa ku dhowaad laba saacadood oo kaxaynta garoonka diyaaradaha ee SHANGHAI. Ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddeena, Kusoo dhawow booqashada warshaddeena ...
Jiangsu Faygo Union Makiinado Co., Ltd.
Mashiinnada aan soo saareyno waxaa ka mid ah: mashiinnada xawaaraha dhalada leh ee xawaaraha sare, mashiinnada wax lagu buuxiyo, mashiinnada wax lagu miiro dharbaaxo, xargaha tuubbada, qalabka astaanta, qalabka alwaax-caag ah iyo qalabka xaashi caag ah iyo kaabayaasha la xiriira
Qalabka iibinta ugu fiican
"Ahaanshaha Qof Wanaagsan, Samaynta Mashiin Wanaagsan"
Waxaad ku heli doontaa xalka ugu fiican qiimo wanaagsan ganacsigaaga!
Xal u hel
Adeegga khadka tooska ah
Maamulayaashayada iibku waa 24 saacadood oo khadka tooska ah waxayna macaamiisha siiyaan jawaab deg deg ah. Haddii aad u baahan tahay wax macluumaad ah oo ku saabsan alaabtayada, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto
Shatiyada iyo shahaadada
Faygo Plast wuxuu leeyahay 13 shati-qaran, oo ay ku jiraan 8 shati-abuuris. Waxaan sii wadaynaa hagaajinta alaabtayada waxaanan siineynaa tikniyoolajiyad cusub macaamiisheena. Alaabtayadu waxay leedahay shahaadada CE iyo ISO
Mashiinadeenu waxay qaadan doonaan qaybaha caalamiga ah ee korantada. Mashiinnada oo dhan waa la tijaabin doonaa ka hor rarka. Caymiska ganacsiga waxaa laga heli karaa Faygo Plast.
Hordhac kooban iyo qiimeyn Video Video Hordhaca iyo qiimaynta kooban ee VideoHordhaca iyo qiimaynta kooban ee VideoHordhaca kooban iyo qiimaynta Video
Bandhigii Goddess ， FAYGO ...
Bandhiggii Goddess-ka ayaa yimid, FAYGOUNION-na waxay u diyaarisay salon qurxin ubax loogu talo galay ilaahyada. Magaca ubaxyada, ilaahyada Shiinaha waxay u wada tagi doonaan arrimaha ubaxa. Waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiinba maalinta farxadda ilaahadda! Roses, platycodons, carnations, ubax, macallinka soo bandhig ...
Chinaplas 2019 bandhigga Macaamiisha
waxaan halkaan ku leenahay labo waab, mid waxaa loogu talagalay mashiinka lagu afuufo dhalada ee PET lambarka waabkuna waa 11.1 C01, waxaan halkaan ku soo qaadaneynaa mashiinka dhalada afuufaya ee dhaladayaga 4 godka 6500-7200BPH (mashiinka noocan ah oo leh astaamaha sida soo socota: 1. Xawaare sare; 2. Kaydinta tamarta, kaliya waxay ubaahantahay awood hawl 22kw; 3. Fudud ...
Dhalaalay dhoobada dharka ...
Mallaal makiinadda mashiinka dhar-ka-baxa ee la buufiyo - Sifee Muhiim ah oo waji-xidhashada Shirkadda Faygo Plast waxay isku daydaa sida ugu fiican inay ula dagaallanto COVID-19 Dharka dhalaalaya ee la dhalaalay ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee waji-xidheennada, aad bay u adag tahay in suuqa la galiyo dhawaan. Faygo Plast wuxuu soo saaraa dhalaalka tayada sare leh dhar mashiinka extrusion ...
Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan ku abuurno iskaashi horumarineed oo muddo dheer ah oo aan kula yeelanno adeegyo tayo sare leh iyo adeegyo xirfad leh
Khadadka Tuuboyinka Hal Darbi Jiif ah, Pe / pp / PCV jiingado tuuboyinka Production Line, Double Wall jiingado Mashiinka Mashiinka, Hdpe Double Wall jiingado tuuboyinka Line Production, Single Wall jiingado tuuboyinka Mashiinka, Khadka Hdpe jiingado tuuboyinka Extrusion,